Ifektri yeSoy Sauce - Abakhiqizi nabaThengi baseChina iSoy Sauce
Isoso se-Zhenji soy
I-Original Brewed Premium Soy Sauce
I-Soft Rice Vinegar
Igama lomkhiqizo: i-zhenji soy isoso Kuqinisekisiwe, isobho lesosawoti eliyingqayizivele: Amanzi, usawoti we-soybean, ukolweni, usawoti. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Ikhwalithi: Ukuphila kweShelf ebangeni lokuqala: Izinyanga eziyi-10 isitolo endaweni emnyama neyomile ebekwe uphawu. Isici somkhiqizo: Iphunga linothile, futhi ukunambitheka kumnandi. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa kabanzi kuma-snacks, ukhukhamba, isobho le-soy powder, isigqoko sokugqoka, ama-eels athosiwe, isoso sebhali
Igama lomkhiqizo: i-zhenji soya isoso Ayikho isobho se-soya se-GMO Isithako: Amanzi, ushukela obhontshisiwe, ukolweni, usawoti. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Ikhwalithi: Ukuphila kweShelf ebangeni lokuqala: Izinyanga eziyi-12 isitolo endaweni emnyama neyomile ebekwe uphawu. Isici somkhiqizo: Iphunga linothile, futhi ukunambitheka kumnandi. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa kabanzi kuma-snacks, ukhukhamba, isosi kasoso powder, isigqoko sokugqoka, ama-eels afakiwe, isoso sebhali Sp ...
Igama lomkhiqizo: i-zhenji soya isoso Itshalwe ngokwemvelo, isosi enososo engcwele Isithako: Amanzi, ushukela obhontshisiwe, ukolweni, usawoti. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Ikhwalithi: Ukuphila kweShelf ebangeni lokuqala: Izinyanga eziyi-12 isitolo endaweni emnyama neyomile ebekwe uphawu. Isici somkhiqizo: Iphunga linothile, futhi ukunambitheka kumnandi. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa kabanzi ekudleni okulula, ukhukhamba, isosi kasoso powder, isigqoko sokugqoka, okokugcoba okuphekiwe, isoso sebhali
UZhenji Soy Sauce (20kL FLEXITANK)
Igama lomkhiqizo: i-zhenji soya isoso Ayikho i-GMO, isosi elicwengekile le-soy Ingredient: Amanzi, usawoti we-soybean, ukolweni, usawoti. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Ikhwalithi: Ukuphila kweShelf ebangeni lokuqala: Izinyanga eziyi-6 esitokweni endaweni eyindilinga neyomile ebekwe uphawu. Isici somkhiqizo: Iphunga linothile, futhi ukunambitheka kumnandi. Ukusetshenziswa: Kusetshenziswa kabanzi kuma-snacks, ukhukhamba, isobho le-soy powder, isigqoko sokugqoka, ama-eels athosiwe, isoso sebhali
Igama lomkhiqizo: I-Zhenji soy isosi se-Zhenji soy isosi senziwe kusuka kusoyisi we-non-GMO kanye nekolweni eliphakeme ngobuchwepheshe obuphambili bokwetha. Izithako: amanzi, u-soya owonakalisiwe, ukolweni, usawoti, i-potassium sorbate, I + G, i-sucralose Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga lokuqala Lendawo endaweni enomthunzi neyomile eyakhiwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 1L * 12 ngebhokisi ngalinye le-12 ibhokisi le-20'FCL 500mL * 24 ngebhokisi le-1100cartons nge-20'FCL Nutrition Information Service s ...
Isoso se-soy ukukhanya kwe-Daodao
Igama lomkhiqizo: I-Daauo Light Soy Sauce Sisetshenziselwa ikakhulukazi ukubamba nokuthambisa-ukuthambisa noma njengesigqoko sokugqoka noma sokuntywila, okusha nokunambitha. Izithako: amanzi, ushukela obilisiwe, ukolweni, usawoti, utshwala obudlekayo, ushukela, i-monosodium glutamate, i-caramel, i-sodium benzoate, I + G, sucralose. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga lesithathu Isitoko endaweni enomthunzi futhi eyomile ibekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 500mL * 12 ibhokisi ngalinye le-1500 yamabhokisi ngakunye kwe-20'FCL Nutrition Infor ...
I-DaoDao isosi emnyama soya
Igama lomkhiqizo: I-Daodao Dark Soy Sauce Isetshenziselwa ukwenza ubuciko kanye nokudla ngamafutha anambithekayo amaningi, futhi amnandi kakhulu. Izithako: amanzi, u-soya owonakalisiwe, amabele kakolweni, i-caramel, usawoti, i-monosodium glutamate, i-xanthan gum, i-sodium benzoate. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga lesithathu Isitoko endaweni enomthunzi futhi eyomile ibekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 500mL * 12 ibhokisi ngalinye lama-1500 amabhokisi ngakunye kwe-20'FCL Nutrition Information servings ngephakheji ngalinye: I-Appro ...
I-Refresh Soy Sauce ekhanyisiwe
Igama lomkhiqizo: Izithako ze-Soy Sauce ze-Light Refined Light eziyi-180: amanzi, usawoti oxosiwe, ukolweni, i-caramel, usawoti, i-monosodium glutamate, utshwala obudliwayo, I + G, sucralose. I-Amino acid nitrogen (ngokuya nge-nitrogen) ≥ 1.20g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga elikhethekile leSitoko endaweni enomthi futhi eyomile ibekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: 500mL * 12 ngebhokisi ngalinye lama-1500 amabhokisi ku-20'FCL Nutrition Information servings ngephakheji ngalinye: Approx.33 usayizi wokusebenzela: 15mL NRV% Energy 65kJ 1% Amaprotheni 1.8 ...
Sauce Wamnyama Ochanyiwe
Igama lomkhiqizo: Izithako ze-Suck Sauce eziyi-180 ezihlaziyiweyo: Izithako zamanzi, utshwala, ukolweni, i-caramel, usawoti, i-monosodium glutamate, utshwala obudlekayo. I-Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga lokuqala Lwesitoko endaweni enomthi futhi eyomile kufakwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: I-500mL * i-12 ibhokisi ngalinye lama-1500 ama-20'FCL Ama-Nutrition Information servings ngephakheji ngalinye: I-Approx.33 usayizi wokusebenzela: 15mL NRV% Amandla 95kJ 1% Amaprotheni 1.2g 2% Fat ...
Yehlisa Usawoti Soyce
Igama lomkhiqizo: I-180 Yehlisa iSawoti Soyce Sauce Iqhutshwa ngo-soya non-GMO non-GMO osezingeni eliphakeme isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingama-180. Unosawoti omncane ongama-30% kunowethu loqobo we-180 we-Premium Soy Sauce. Izithako: amanzi, ushukela obilisiwe, ukolweni, usawoti, ushukela omhlophe ocwebezelwe, utshwala obudliwayo, i-monosodium glutamate, i-weast ekhishwe, i-lactic acid, uviniga, I + G Amino acid nitrogen (ngokusho kwe-nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Ikhwalithi yokuqala endaweni enomthunzi futhi eyomile ebunjiwe. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 Ukucaciswa: ...
Igama lomkhiqizo: I-soy yokuqala eyenziwe ngo-180 yohlobo lwebholishi yenziwa kabusha I-soybean engeyona eye-GMO noshukela osezingeni eliphakeme izinsuku ezingaphezu kwezingu-180. Akunantengezelo yokudla okufana nokugcinwa kokudla, izithasiselo zokunambitheka, ama-sweeteners nama-coloring agents. Inokunambitheka okucebile okumnandi nombala wemvelo obomvu onsundu. Ingqobelo: Amanzi, usawoti o-defatted, ukolweni, usawoti. I-Amino acid nitrogen (ngokuya nge-nitrogen) ≥ 0.90g / 100ml Ikhwalithi: Ibanga elikhethekile leSitoko endaweni enomthunzi futhi eyomile ebekwe uphawu. Impilo yeshelf: Izinyanga ezingama-24 uSpec ...
Isithasiselo: No.34 GuangAn Street, Shijiazhuang idolobha 050011, isifundazwe Hebei, China
Gijimani, masibe namandla!
Izimbali nokuhleka, ukukhuphuka yonke indlela
Lwa nobhubhane, bonisa uthando, vikela ...
Okuqukethwe kule webhusayithi kuhambisana nemithetho nemithetho yaseChina!